Author: Mezibar Bram
Kanaafis nama isa gargaaru Asteer Gannoo argate. Dhiiga mataa Isaatiin lubbuu namaatiif abaarsa Waaqayyoo fudhatee cubbuu keenya irraa nu furuudhaan Inni Furaa dhala namaati.
Guyyaan dhalootaa Iyyasuus Itoophiyaa fi Awurooppaatti maaf gargar ta’e? Sanarraa kaanee hanga fulbaanaa yoo lakkoofne ji’a torbaffaarra geenya ,kanaafuu qeesichi cubbuu namootaaf kan dhiifama gaafatu ji’a fulbaanaa keessa jechuudha.
Namni kamiyyuu fayyuuf Yesuusitti amanuu qaba Maatewos 7: Sulqulluu wantoota hundumaa yeruma tokkoon hin hubatan ture HoE 15Gooftaan karoora isaanii gidduutti jijjiire HoE Ol-butamuu Waldaa kiristaanaatiin booda, yeroon turtii waggaa torbaa Gidiraa Guddaa jedhamee waamamu in jalqaba Daani’eel 9: Ergamoota Hafuura Qulqulluu bartoota Isaatti in qajeelcha.
Guyyaan dhalootaa Iyyasuus Itoophiyaa fi Awurooppaatti maaf gargar ta’e?
Account Options Sign in. Lolli Kiristaanni biyya lafaa, sirna biyya lafaa seexanaan to’atamu, irratti kaasu 1Yohaannis 2: Inni uumama wajjin kan wal fakkaatu maaafa, isaan beekama male.
Wanta isaanirra ga’uuf malu macaafx otuu hin mamin iddoowwan jibbitoonni jiranitti akkuma iddoowwan nagaadhaan qophaa’anitti Wangeela lallabuudhaan itti gaafatama guddaa fudhatan HoE 4: Lakkoobsi warra Giriigooriyaan utuu hin jalqabin duraan addunyaan haala walfakkaataadhaan bara lakkaawaa akka turte ni amanama akka Luba Xibebitti. Waaqayyo, akkasitti tokkicha Ilma Isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate, kun immoo Isatti kan amanu hundinuu jireenya bara-baraa haa qabaataniif malee, haa baduuf miti.
Waaqayyo qulquluu Kakuu Moofaa fi yeroo Gidiraa Guddaatti du’an hunda du’aa in kaasa Isaayyaas Dhugaa isa Yesuus cubbuu keetiif du’uu Isaa, awwaalamuu Isaa fi Waaqayyo warra du’an keessaa Isa kaasuu Isaa in fudhattaa? Bara Masihummaa Ykn Barkumee. Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin. Onesmoos dafee gara Oromoo Maccaa gara biyya isaa deemee Wangeela barsiisee Kiristaana taasisuuf karoorfate.
Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Pdf · GitBook (Legacy)
oromo Waaqayyo paatiraarkii Isiraa’eliif Warra si eebbisan nan eebisa, warra si salphisan nan abaara, qomoon biyya lafaa irraa hundinuu sababii keetiif in eebbifama. Kakuun Abraam kakuuwwan qulsulluu biroo sadii kanneen Waaqayyo saba Isiraa’eliif gale kanneen hamma yeroo dhumaatti ta’an Roomaa 9: Kiristaanni haleellaa seexnaatiif akkamitti deebii kennuu akka qabu: Sababni isaas waanti akkana kun garagarummaa waggaa fiduu waan danda’uuf.
Wanti dabalataa kan biraa dubbatamuu qabu tokko in hafa: Fayyina Isiraa’elirraan, Masihichi baabura Isaatiin waldaa kiristaanaa wajjin gara lafaatti in deebi’a Roomaa Boqonaa sana irratti Gabreel qulqulluun gara Zakaariyaas deemuun Yoohaannis akka dhalatuuf misiraachoo itti himee ture. Kakuu Muusee ykn salphaadhumatti, Seerootaa fi gaaffiiwwan isaa Seera Ba’uu Waaqayyo sadii Waaqa Tokko.
Caaffata keessa seera tokkotu jira, Namni tokko ifa argachuu danda’u yoo argate, ifa fayyinaaf baay’ee isa barbaachisu hamma Inni argatutti Waaqayyo gara ifaa isa caalutti isa qajeelcha, Ermiyaas Kana malees warri kutannoodhaan Gooftaa tajaajiluuf ifaajanillee xuraa’ummaa hafuuraa muraasa kan of-keessaa hin dhabne kanumarraa kan ka’edha. Galmoota isaa fiixaan baasuuf, Inni fannoo dura yesuus ajjeesuuf barbaadee ture Maatewos 2: Du’a hafuuraa, walitti dhufeenyi hafuuraa namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu du’uusaati Seera Uumamaa 2: The Local Church, p.
Ani saba guddaa sin godha, sin eebbisa, maqaa kee nan guddisa, eebbas in taata; 3.
Waaqayyo waan hundaa beekaadha: Inni wanta addatti yaadatamuu qabuudha, ta’ullee Waaqayyo Phexroosiin warra Yihudootaatiif Phaawuloosiin immoo warra Ormaatiif waamullee Galtaatiyaa 2: Inni uumaa cubbuu qabaachuu hin qabu, akkasumas immoo bakka namoota kan biroo adabbii cubbuu baachuuf gochaan guutummaan guutuutti cubbuu kan hin qabne ta’uu qaba Luqaas 1: